अन्तरास्ट्रिय समाचार Archives - Enepal Serofero
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामा जब धोक्रो बोकेर अस्पताल पुगे……
५ पुस, काठमाडौं । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीलगायतका भीआईपीहरुको रवाफ थेगिनसक्नुको छ । सर्वसाधारणलाई जाममा पार्दै साइरनजडित गाडीमा हुइँकिनेदेखि भड्किलो जीवनशैली अपनाउनु उनीहरुको दैनिकी नै हो । यही कारण नेपालका भीआईपीहरु सर्वसाधारणका नजरमा आलोच्य छन् । तर, विदेश, त्यसमा पनि शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको कुरा अलि बेग्लै छ । त्यहाँका भीआईपीहरु रवाफिलो भन्दा पनि सरल जीवन बाँच्छन् । हामीले साना ठानेका काम निस्फिक्री गर्छन् र जनताका दुःखमा हात अघि बढाउँछन् । राजनीतिलाई साँच्चै उत्तरदायी र सेवाको रुपमा उपयोग गर्छन् । यहीबीच अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले बासिंटन डीसीस्थित चिल्ड्रेन्स नेशनल हस्पिटल पुगेर क्रिसमसको अवसरमा बालबालिकालाई उपहार बाँडेको विषय सार्वजनिक भएको छ । सान्ता क्लजले लगाउने शीरमा रातो फ्लपी टोपी र काँधमा धोक्रो बोकेर अस्पताल आएका ओबामालाई
१२ मंसिर, सिड्नी । अष्ट्रेलियामा हावाहुरीसहित भारी वर्षा भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ । सिड्नी, बुलुङ्ग, कुटुम्बा, गोसफर्ड, न्यूकासल लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । २०१५ यताकै ठूलो पानी परेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । बुधवार बिहान सवा पाँच बजेदेखि ७ बजेसम्म दुई घण्टाको अवधिमा सिड्नीको मिलर्स पोइन्टस्थित अब्जरभेटरी हिलमा ८४.६ मिलिमिटर पानी परेको छ । नोभेम्बर महिनामा सिड्नीको औसत वर्षा दर ८३.८ मिलिमिटर हो । तर यो वर्षाको रेकर्ड बुधबार दुई घण्टामै तोडिएको मौसम विभागले उल्लेख गरेको छ । अब्जरभेटरी हिलमा १०६ मिलिमिटर, उत्तरी सिड्नीको मोसम्यानमा १११ मिलिमिटर र सेन्ट्रल कोस्टस्थित शोलहेभेनमा १५२ मिलिमिटर पानी परेको छ । नोभेम्बर महिनामै यति ठूलो पानी परेको पहिलो पटक हो । भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण सिड्नी शहरसहितका क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ । घर, शपिङ कम्प्लेक्स जताततै
एजेन्सी । पाकिस्तानको पेशावरस्थित एण्टि नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ)को महिला टीमले ४०० किलो अवैध ड्रग्स जफत गरेर त्यसमा आगो लगाइदिएको छ । यसपछि महिलाहरुले आगोको लप्कासँगै सेल्फी लिए । उनीहरुका ति तस्वीर भाइरल भएका छन् । मानिसहरु उनीहरुको हिम्मतको सम्मान दिन्छन् । आगोको अगाडी तस्वीर लिनुलाई ड्रग्सविरुद्ध महिलाको अभियानका रुपमा लिइएको छ । भाइरल भएको एक तस्वीरमा एक महिला प्रहरी हातमा राइफल लिएर सनग्लास लगाएको देख्न सकिन्छ । एण्टि नारकोटिक्स फोर्सका डीजी मेजर जर्नेल मुसर्रत नवाज मलिकका अनुसार जो चिजले समाजलाई खतम गरिरहेको छ त्यस मध्ये ड्रग्स सबैभन्दा खतरनाक छ । एण्टि नारकोटिक्स फोर्सले ड्रग्सलाई पूर्णरुपमा खतम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले ट्वीटरमा लेखेको छ, ‘एएनफकी महिला टीमले जे गरेर देखाए, त्यसको बारेमा अरु सोच्न पनि सक्दैनन् ।’ from dcnepal.com
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा भएको एक चुनावी र्‍यालीमा बम आक्रमण हुँदा कम्तिमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नागरिक र सुरक्षा फौजका व्यक्ति रहेका अफगान सुरक्षाबलले जनाएको छ । तखार प्रान्तका प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखका प्रवक्ता खलिल असरले ३२ जना अरु घाइते भएको जनाए। रुस्ताक जिल्लामा आयोजित चुनावी र्‍यालीलाई लक्षित गरी मोटरसाइकलमा बम राखेर पड्काइएको थियो । तखारको उक्त आक्रमणको हालसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन, तर तालिबान लडाकू यस प्रान्तमा सक्रिय रहेका छन्। अक्टोबर २० मा हुने संसदीय चुनावलाई लक्षित गरी देशैभर आक्रमण भइरहेका छन्।
काठमाडौं – तपाईँ साउदीमा हुनुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु होला । नत्र जेल सजाय र जरीवाना पनि हुनसक्छ । फेसबुक, इमो, म्यासेन्जर लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा साउदीको ‘एन्टी साइबर क्राइम ल’ विपरीत भएमा पाँच वर्षको जेल सजाय र ३० लाख साउदी रियाल वा दुवै सजाय हुन सक्छ । नेपाली दूतावास साउदीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा रहेका सबै नेपाली कामदारलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन अनुरोध पनि गरेको छ । सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गर्दा यी उपाय अपनाउनुपर्छ साउदीमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो फोनबाट अनावश्यक मेसेज वा कुरा नगर्नुहोस् । फेसबुक, इमो, ह्वाटयाप, म्यासेन्जर लगायत माध्यममा साउदीको कानुन विपरीत कुनै कुरा अपलोड, शेयर कमेन्ट गर्न हुँदैन । आफ्नो फोन सकेसम्म अरुलाई चलाउन नदिनुहोस् । साथै आफैंले पनि साउदीमा अपरिचित व्यक्तिलाई फोन गरेर अनावश
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री तनुश्री दत्तले अभिनेता नाना पाटेकरविरुद्ध १० बर्ष अघि यौनहिंसा गरेको उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराएकी छन् ।भारतिय मिडियाका अनुसार तन्नु अन्नतत प्रहरी खोरमा पुगेकी हुन् । महाराष्ट्रका गृहमन्त्रीले मिडियामा आउनुभन्दा पनि प्रहरीकहाँ उजुरी दिएर जाँच गराउँदा हुने बताएपछि उनी प्रहरीको मा पुगेको बताइएको छ ।उनले ओशिवारा प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गराएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । बलिउड छाडेर अमेरिका बसेको १० बर्षपछि फर्किएकी तनुश्रीले उक्त फिल्मको गीतको छायांकनका क्रममा गलत तरिकाले नाना पाटेकरले छोएको अभियोग लगाएकी थिइन् ।उक्त घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताएका नानाले यसको जवाफ १० बर्ष अघि नै दिइसकेको पनि बताएका थिए । from .osnepalnews.com
एजेन्सी- पछिल्लो समय विश्वमा सेक्स डलको प्रयोग बढेको तथ्याँकहरुले देखाइसकेको छ। यसको प्रयोग हलिउडका चलचित्रहरुमा समेत भैसकेको छ। केहि वर्ष देखि चाइनीज सेक्स डलको चर्चा धेरै हुन थालेको छ। यी चाइनिज सेक्स डलहरु कृत्रिम मस्तिष्क भएको कारण पनि बताउने गरिन्छ। यी डलहरु रोबोट जस्तै बोल्ने क्षमता पनि राख्ने गर्छन्। हलिउड चलचित्रहरुमा सेक्स डलको प्रयोग कुनै नयाँ भने पक्कै हैन। सन् १९९९ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘आईज़ वाइड शट’मा कयौं दृश्यहरुमा सेक्स डलको प्रयोग भएको थियो। यस चलचित्रमा विभिन्न आपत्तिजनक दृश्यहरुमा सेक्स डलको प्रयोग भएको छ। आर आर मार्टिनको उपन्यास ‘ए संग अफ आइस एण्ड फायर’ मा आधारित गेम अफ थ्रोन्समा पनि धेरै एस्समय अगाडी देखि सेक्स डलको प्रयोग गरेर आपत्तिजनक दृश्यहरु खिचिएको थियो। सन् २०११ मा आएको चलचित्र शेम मा एक सेक्स एडिक्टको कहानी देखाइएको छ। धेरै समय सम्म कुनै पनि महिलासँग
श्रीमानलाई रुखमा बाँधेर उनकै अगाडी श्रीमती र छोरीको सामुहिक बलात्कार, पक्राउ परे यी व्यक्तिहरु
भारतको बिहारमा घटेको एउटा घटनाले अहिले पुरै भारत आतंकीत भएको छ । रुखमा पतिलाई बाँधेर उनको श्रीमती र छोरीलाई एकैचोटी बलात्कार गरेको घटनाले पुरै भारत आतंकित भएको हो । भारतीय मिडियाले जघन्य अपराधको घटनालाई निकै प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बिहारका एक व्यक्तिलाई रुखमा बाँधेर उनकै अगाडी उनकी श्रीमती र छोरीको सामुहिक बलात्कार भएको थियो । बिहादर प्रहरीले बलात्कार संलग्न भएको आशंकामा करीव २० जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका केहि मध्ये पिडितले उनिहरुको पहिचान गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पक्राउ परेकाहरुको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन । घटना गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धानको लागि उच्च स्तरको छानविन समिति गठन गरिएको प्रहरीले बताएको छ । घटनालाई राजनितिकरण गर्न खोजीएको भन्दै त्यसको पनि बिरोध भएको छ from osnepalnews.com
इन्डोनेसियामा भूकम्प र सुनामीः मृतकको संख्या ३८० पुग्यो
जाकार्ता । मध्य इन्डोनेसियामा पर्ने सुलावेसी प्रान्तमा गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३८० पुगेको छ । सुलावेसीमा शुक्रबार ७.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि आएको सुनामीमा तीन मिटर अग्लो छाल उठेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मृत्यु हुनेमा धेरै पालु शहरका छन्, जहाँ १० फिटसम्म अग्लो छाल शहरमा प्रवेश गरेको थियो । तस्वीरहरूमा सडकमा दर्जनौं शवहरु राखिएको देखिएको छ । कयौं भवनहरु पनि भत्किएका छन् । शहरको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा समेत क्षतिग्रस्त भएको छ । अस्थायी टेन्टहरूमा राखेर घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । समाचारहरूमा जनाइएअनुसार स्थानीय हवाइ अड्डामा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ । यसले पालू शहरमा राहत सामाग्री लैजान समेत कठिनाई भइरहेको छ । इन्डोनेसियाको सुरक्षा फौजले राजधानी जाकार्ताबाट मा सैन्य सहयोग पुर्‍याउने प्रयास जारी राखेको
उत्तेजना फैलाउन अमेरिकाले विवादित क्षेत्रमा वमबर्षक विमान उडायोः चीन
१२ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी बी–५२ नामक वमबर्षक विमान साउथ चाइना सी र इस्ट चाइना सीमामा उडाइएको प्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ । दुई विश्व शक्ति राष्ट्रबीच कर वृद्धिलाई लिएर व्यापार युद्ध चलिरहेका बेला थप नयाँ विवादले प्रवेश पाएको हो। विवादित क्षेत्रमा अमेरिकाले वमबर्षक विमान उडाएको केही दिनपछि त्यसको आलोचना गर्दै चीनले उत्तेजना फैलाउने मनसायस्वरुप यस्तो गतिविधि भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘अमेरिकी बी–५२ नामक वमबर्षक विमान साउथ चाइना सी र इस्ट चाइना सीमामा उडाएर अमेरिकाले उत्तेजना फैलाउन खोजेको छ’, चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार त्यसको आलोचना गर्दै भनेको छ । उडानका बिषयलाई लिएर अमेरिकी रक्षा केन्द्र पेन्टागनले बुधबार इस्ट चाइना सीमा भएको आफ्ना वमबर्षक विमानको उडान जापानसँगको संयुक्त अभ्यास भएको र यसको एक दिन पहिले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको प्रयोग गरी उडेको जनाएको छ । अमेरिकी सै
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,918)
मगर्नी भाउजूको कथा (13,465)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,487)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,058)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,591)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,459)